डचटाउन नेबरहुडको सफाई - डचटाउनस्टा.लि. .org डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन नेबरहुडमा सफा
डचटाउन सुन्दर राख्न मद्दत खोज्दै हुनुहुन्छ? हामी अक्सर पाएका छौं स्वैच्छिक अवसरहरू माथि डचटाउन क्यालेन्डर! यदि गल्ली सफा गर्नुहोस्, समुदाय बागवानी, र यस्तै प्रकारको चीज तपाईंको हो भने, डचटाउनमा आगामी छिमेकी सफाई ट्र्याक राख्न यस पृष्ठलाई बुकमार्क गर्नुहोस्।
यसलाई सफा राख्नुहोस्!
छिमेकी सफाई र फुटबल महोत्सव
"KIC" फुटबल र सामुदायिक सहभागिता को एक नयाँ युग बन्द मार्क्वेट पार्क! बिहान र सफाई को लागी पार्क मा र डचटाउन छिमेकी भर मा तपाइँको छिमेकीहरु संग जोड्नुहोस्। त्यसपछि मैदान मा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल को लागी ट्युन रहनुहोस् र फुटसल अदालत अपरान्हमा।
हामीलाई पार्क मा 9am मा सामेल उपकरण, खाना र पेय पदार्थ, र टी शर्ट (जब आपूर्ति अन्तिम) लाई समात्नुहोस्। हामी पार्क मा र टाढा टाढा रद्दीटोकरी, झारपात, र Marquette वरपर अन्य भद्दा दृश्यहरु लाई टाढा जान्छौं।
तपाइँ घर बाट पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ - तपाइँको अगाडिको र पछाडिको गज सफा गर्नुहोस्, तपाइँको गल्लीमा लिटर उठाउनुहोस्, झारपात र झाडीहरु काट्नुहोस्, वा तपाइँको घर र तपाइँको ब्लक सजाने को लागी अन्य तरिकाहरु पत्ता लगाउनुहोस्।
चारैतिर टाँस्नुहोस् फुटबल खेलाडीहरु दिउँसो बाट शुरू मा खुसी हुन। डचटाउन र क्षेत्र भर बाट खेलाडीहरु लुइसियाना को साथ मुख्य मैदान मा र वर्जीनिया र Gasconade मा नयाँ फुटसल अदालत मा आफ्नो कौशल देखाउने छन्।
युवाहरुको लागी सशुल्क अवसर
१ to देखि २४ बर्ष उमेरका छिमेकीहरु बाहिर आएर र सफाई प्रयासहरुमा सहयोग गरेर आठ घण्टा सम्म १० डलर प्रति घण्टा कमाउन सक्छन्। इमेल kicstlouis@gmail.com वा कल गर्नुहोस् (314) 265-6186 दर्ता गर्नु। पूर्व दर्ता आवश्यक छ।
यो सफा प्रायोजकहरु राख्नुहोस्
यो घटना को एक संयुक्त प्रयास हो डचटाउन मुख्य सडकहरू र स्लाको। अतिरिक्त समुदाय साझेदारहरु सामेल छन् उपचार हिंसा डचटाउन, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, गार्सिया गुण, गुरुung बजार, ला लिगा ल्याटिनो अमेरिका, लु Fusz फोर्ड, लुथरन विकास समूह, सेन्ट जोसेफ हाउसिंग पहल, सेन्ट Louligans, Umoja सेन्ट लुइस फुटबल, र Vitendo4अफ्रिका.
यो गतिविधि आंशिक रूपमा आवास र शहरी विकास विभाग र सेन्ट लुइस सामुदायिक विकास प्रशासन को शहर बाट सामुदायिक विकास ब्लक अनुदान कोष को एक आवंटन को माध्यम बाट वित्त पोषित छ।
सफाई आयोजना गर्नुहोस्
ब्राइटसाइड सेन्ट लुइस तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ रद्दीटोकरी झोलाहरू, ग्लोभहरू, र तपाईंको सफाईको लागि उपकरणहरू। अनलाइन फारम भर्नुहोस् or एउटा प्रिन्ट गर्नुहोस् र पठाउनुहोस् तपाइँको सफाई सामग्री आरक्षित गर्न मा।
DutchtownSTL.org ले तपाइँलाई तपाइँको सफाई घटनाको बारेमा शब्दहरू हाम्रो वेबसाइट मार्फत मद्दत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र twitter। हामी अनुकूलित फ्लायर डिजाइनहरू पनि प्रदान गर्न सक्दछौं ताकि तपाईं स्वयंसेवकहरूको लागि आफ्नो क्षेत्र क्यान्भास गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस तपाइँको सफाई हामीलाई थाहा दिनुहोस्।